Izindaba - Vibration motor ayinamanzi
Inqubo yonke yokuhlola imoto edlidlizelayo ukuhlola nokubala izinto zokwakha. Izinto zokucaciswa okuhlukile zihlukaniswe ngezinto eziphezulu nezingezansi. Ukusebenza kokuhlolwa kufanele kube phezulu, amandla wokusebenza okuhlobene kufanele ahlangabezane nezidingo, futhi izinto zokwakha nazo zingahanjiswa. Kunezizathu ezahlukahlukene zokuhlolwa kwezinto ngokudlidliza isikrini, ukuze izinto ezincane kune-mesh zingakwazi ukudlula emgodini wesisefo sesikrini esidlidliza ngokushelela. Ingxenye encane kuphela yezinto ezinhle ingadedelwa emgodini we-sieve, kuyilapho ezinye izinto ezincane kunembobo ye-sieve zixutshwe nezinto ezinkulu kunezimbobo zesisefo (okungukuthi okubhalwe esikrinini).
Okokusebenza kokuhlolwa kwemoto yokudlidliza, indawo yokuhlola esebenza kahle, isakhiwo sesikrini, isakhiwo sesikrini esidlidlizayo, imvamisa yokudlidliza ne-amplitude nakho kuyizinto eziyinhloko ezithinta ukusebenza kahle kokuhlolwa kwesikrini esidlidlizayo; ngenxa yobungako bento, umswakama (okuqukethwe umswakama), ukusatshalaliswa kwezinto eziyimbudumbudu nokuswakama kwezinto ezibonakalayo, futhi kuyisizathu esiyinhloko esithinta ngqo isilinganiso sokuhlola kwesikrini esidlidlizayo. Izinto ezinokufudumala okuhle okuhlobene nesihlobo, okuqukethwe okuncane kwamanzi, ukwakheka kwezinhlayiyana ezijwayelekile, umphetho oshelelayo futhi akukho miphetho namakhona kulula ukudlula esikrinini.
Ukuze uthuthukise ukusebenza kahle kokuhlolwa kwemoto edlidlizayo, kulabo izinto ezinhle nezinto zokwakha okunzima ukusibuka, isikrini esiyindilinga esiyindilinga singalungisa ukuqondisa kokujikeleza kwesidlidlizi (buyisela emuva ukujikeleza kokuhamba kwempahla) ukunweba isikhathi sokuxhumana phakathi ubuso besikrini nezinto ezibonakalayo, ezihambisana nezinga lokuhlola, kepha amandla wokucubungula azoncishiswa; umugqa wokudlidliza komugqa unganciphisa ngokufanele i-engeli etshekile ebheke phansi yesikrini esidlidlizayo noma uyikhulise i-Vibration tilt angle isetshenziselwa ukwehlisa ijubane lokugijima kwezinto nokwenza ngcono izinga lokuhlola; ngezinto zokwakha okulula ukuthi zihlolwe nezinhlayiya ezinkulu, i-engeli eya phansi ebheke phansi yesikrini sesikrini esidlidlizayo ingakhuphuka noma i-angle yokuthambekela kokudlidliza inciphiswe ukusheshisa ukugeleza kwezinto, ukuze kuthuthukiswe ukucubungula umthamo. Uma ukukhishwa kwesikrini sokudlidliza komugqa kudingeka ukuthi kube ngaphezulu, futhi kufanele kuhlangatshezwane nokusebenza kokuhlola namandla okuphatha, ububanzi nobude bendawo yesikrini esidlidlizayo bungandiswa.